Kugadziridza-fiber laser yekucheka muchina Precision machining zvido zvesimbi zvinhu Metallic zvinhu zvinongedzera kune esimbi zvinhu kana esimbi zvinhu zvinonyanya kuumbwa nesimbi zvinhu. Pakati pavo, kusanganisira simbi yakachena, alloys, yakakosha simbi zvinhu, nezvimwewo Kufambira mberi kwenzanga kuri padyo ...
Ndezvipi zvigadzirwa zve fiber laser yekucheka muchina inokodzera kutetepa kweplate?
Kuti ushandise zvakadzama zvinangwa zvakarongwa zvehurongwa hwepagore, isa hwaro hwakasimba hwegore idzva rave kuda kutanga Musi waKurume 1, Buluoer akaita musangano wekushambadzira we2021 uye musangano wemhiko; Shandong Jubangyuan Boka Sachigaro Mr. Jing Fengguo, General Manager Mr. Sun Nin ...
Nebudiriro uye kufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, hupenyu hwevanhu huri kukurumidza uye nekukurumidza. Munguva ino yemari, hupenyu hwevanhu nebasa vari kutanga kuteedzera kwakanyanya kushanda uye kunyatsoita, uye fiber laser yekucheka michina inogona kusangana neakanyanya kushanda uye kunyatso kuteverwa na variou ...
Metal laser yekucheka muchina iri kufamba yakakwira yakakwira simba nguva
Muna 2015, iyo 6000W yesimbi laser yekucheka muchina yakabuda. Panguva iyoyo, iko kushambadzira kwemusika kwaive kuchiri kutongwa nesimba repakati pazasi pe3000W. Mumakore mashoma chete, simba resimbi laser yekucheka muchina yakasvetuka kubva ku6000W uye 8000W kusvika 10kW uye 12kW, iyo yaimboita senge iri kure. Nguva ye ...
Inogona here mota antifreeze kuiswa kune simbi laser yekucheka muchina? Ndeupi musiyano uripo pakati pezviviri izvi?
Ruzivo pfupiso: Iyo yekushandisa nzira yesimbi laser yekucheka muchina uye mota antifreeze zvakare yakasiyana. Mota antifreeze inogadzirirwa zvakananga muchikamu chakanaka; apo antifreeze ye laser yekucheka muchina inoda kusanganiswa uye kuwedzerwa zvinoenderana neyakasiyana tembiricha mu ...
Laser yakatemwa simbi yekugadzira yekutamba masitepisi
Ruzivo pfupiso: Iko kuchinjika kwesimbi laser yekucheka muchina kugadzira, chimiro cheplate yesimbi inogona kugadziriswa zvisina tsarukano zvinoenderana nezvinodiwa, izvo zvakare zvinopa nzvimbo yakakura yekugadzirwa kwematanho. Masitepisi akagadzirwa nesimbi-yakatemwa simbi inogona kuve inoyevedza? MugadziriR ...
Nebudiriro uye kufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, kumhanya kwehupenyu hwevanhu kuri kukurumidza uye nekukurumidza. Munguva ino yemari, hupenyu hwevanhu nebasa zvakatanga kuteedzera kwakanyanya kushanda uye nemazvo, uye fiber laser yekucheka michina inogona kusangana nemhando yepamusoro uye kunyatsoita ...
Basa rekuchengetedza remhando dzakasiyana dzeCCC plasma yekucheka muchina inofanirwa kuve yakajeka!
Iko kushandiswa kweCCC plasma yekucheka muchina kunobatsira iyo yekushandira kuti iwane zvirinani kugadzirisa mhedzisiro panguva yekushanda, uye inofanirwa kuve yakajeka mukuzoshandisa kushandiswa. Sisitimu yega yega yemuchina wekucheka inofanirwa kuchengetwa munguva mushure mekushandisa kwenguva refu, kuti ive inobatsira Mukuzoshandisa kwekupedzisira, iyo m ...
Iyo CNC plasma yekucheka muchina yakachinja iyo yekumberi tekinoroji yechinyakare yekucheka muchina!
CNC plasma yekucheka michina inoshandiswa zvakanyanya mumafekitori. Mhedzisiro yemuchina wekucheka unonyanya kuratidzwa kuburikidza nesvomhu yekudzora mashandiro. Mhedzisiro yaro inosiyana zvakanyanya pane echinyakare nzira dzekucheka munguva yakapfuura. Nzira dzakasiyana dzekucheka muchina dzinoshandiswa iro basa ...
Kazhinji izvi zvinhu zvine chekuita pamutengo weCCC yekucheka michina
Kana isu tikatenga CNC yekucheka muchina, isu tinoteerera zvakanyanya pamutengo wayo, tichitarisira kutenga yepamusoro-soro CNC yekucheka muchina pamutengo unodhura, unova unodhura-unoshanda kutsvaga. Muchokwadi, mupepeti anogona kukudzidzisa dzimwe nzira, dzinova kuti unzwisise pamberi pezvinhu zvinokanganisa iyo ...